Maxkamadaynta Dilaagii Somalida ku Nool Dalka Mareekanka oo si toos ah uga socota Minisota. | Wararka Jubbaland
Maxkamadaynta Dilaagii Somalida ku Nool Dalka Mareekanka oo si toos ah uga socota Minisota.
Anthony Sawina nin cadaan Mareykan ah oo loo haysto in uu sanasanadkii tagay dad Somali mareekan ah ku toogtay gobolka Minisota ee dalka mareykanka xilli ay usocdeen ka qayb galka salaadda taraawiixda ee bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxa ay dacwadiisa ka furmatay maxkamadda Gobolkaasi sida uu baahiyay Minesota Public Radio.
Maxkammad Gobolka Minisoota ayaa Jimcihii markii labaad dhageysatay dacwada lagu soo Oogay Anthony Sawina oo la sheegay in uu ku dhaqaaqay falal la xiriira Islaam nacayb iyo Cunsuriyad.
Toogashada ayaa ka dhacday bishii june ee sanadkii hore agagaarka Dinkytown oo wax yar u jirta jaamacadda minesota xilli habeen ah waxaana ku dhaawacmay 2 qof halka qof kale lasheegay in uu ku geeriyooday markii xabado ku furay anthony oo sheegay in uu ka shakiyay dadkaasi.
Qareenka u doodaya Anthony sawina ayaa sheegay in wax walba ay ku dhaceen kama isguna uusan eeda lahayn sida ay qortay Al-jazeera news qeeybteeda ingiriiska.
Sawina Oo maxkamadda kasoo muuqday Jimcihii ayaa iska fogeeyay dacwadda loo haysto inkastoo maxkamadda loosoo gudbiyay Documiintayada cadeenaya dacwadda Anthony..
Sawina iyo saaxiibadiisa oo taagnaa parkinka dinkytown ayaa xabado ku furay Dad Soomaali ah oo gaari ka soo dagayay xilligaas kadib markii ay uga shakiyeen tuuganimo iyo weerar ka dhan ah.
Dhanka kale Toogashada ayaa lasheegay in ay noqon karto mid kutala gal ah dadka latoogtayna ay macquul tahay in ay ku shaaxayeen meel udhow gaarigooda sida uu baahiyay Minisota public radio oo soo xiganaysa Kaamirooyinka qarsoon.
Toogashadani ayaa sidoo kale lasheegay in ay la xiriirto beegsi ka dhan ah dadka muslimiinta sida uu ku cadeeyay qareenka u doodayay dadka soomaalida oo maxkammda kaneenay qof goobta ka dhawaa marka ay toogashadu dhacaysay oo sheegay in uu dhagihiisa ku maqlay ereyga “Fight The Muslims” Oo la macna ah (toogo ama la dagaal muslimiinta).
Sidoo kale ururka udoda xaquuqda muslimiinta dalkaasi Mareykanka oo magacooda loo soo gaabiyo CAIR ayaa codsaday in Anthony loo taxaabo xabsi joogta ah maadaama ay kusoo eedeeyeen Islaam Nacayb.
Qareeka difaacayay Anthony Sawina ayaa maxkamadda u sheegay in falka uu ku kacay Sawina ay ka dhignayd is difaacid ka dhan ah weerar lagu soo qaadi rabay oo uu ka shakiyay.
Xaakimka maxkamadda ayaan wax go’aan ah ka qaadan Dacwadda anthony inkastoo Maxkamadda ay sheegtay in 27 ka bisha laysku soo noqon doono ayaa hadana waxa sawina loo ogolaaday in uu layimaado cadeymo uu isku difaaci karo.